Imibono Yomhlobiso Wokulala Wokulala Womshado Wokuqala Wobusuku Bokuqala - Ezothando Zocansi
Imibono Yomhlobiso Wokulala Wokulala Womshado Wokuqala Wobusuku Bokuqala
ungamisa kanjani ukulahleka kwezinwele kwabesifazane
Ubusuku bomshado wakho ubusuku obukhetheke kakhulu empilweni yakho futhi kufanelekile ukuthi imihlobiso yekamelo lakho lokulala kufanele kubonise ukubaluleka kwalesi senzakalo. Ngokuqinisekile ubungeke uthande ukuchitha ubusuku bakho bokuqala njengendoda nenkosikazi ekamelweni elidala elinesicefe, nelithusayo? Yebo, kunokuningi imibono yokuhlobisa ekamelweni lothando ngobusuku bomshado ongakusebenzisa.
Dlulisa le mibono yokuhlobisa ekamelweni lothando kubangani bakho nezihlobo noma kumhlobisi womshado ozoqinisekisa ukuthi umbono wakho wobusuku bomshado wothando uyagcwaliseka njengoba ubonile. Ngemuva kwakho konke, kumvuthwandaba womshado nakuyo yonke imisebenzi ewuzungezile, kungenzeka ukuthi ungagijimeli wenze umhlobiso wekamelo lakho lokulala!
Kodwa-ke, khumbula ukuthi njenganoma yini ehlobene nomshado, kudinga ukuhlela okuningi. Ngakho-ke lapho uthola imibono yakho yokuhlobisa ekamelweni lothando, qala ukuhlela ukuthi ngubani odinga ukuwabelana naye, okudingayo ukuthenga, izinto ezibandakanyekayo ekumiseni indawo (noma ngabe ikamelo lakho lokulala noma igumbi lehhotela).
Ngenkathi wenza ikamelo lakho lokulala lakho ubusuku bomshado kungenzeka kube phansi ohlwini lwakho lwezinto eziseqhulwini kwezinye izinto eziyikhulu okudingeka uzihlelele umshado wakho, ukhumbula ukuthi ukuqala ngempilo yakho eshadelwe ebumnyameni obuhle, bezothando egumbini lakho lokulala kuyitshe elihle lokunyathela injabulo emshadweni. Nazi ezinye ezinhle imibono ngobusuku bomshado ongabusebenzisa ukwenza ubusuku bakho bokuqala nomyeni wakho bukhumbuleke ngempela.
1. Izimbali Zomhlobiso Wobusuku Bomshado
ezimbili. I-Focal Point Yemihlobiso Yombhede
3. Ukukhanyisa kuyithuluzi Elikhulu
Isine. Ukuthinta Okukhethekile
Izimbali Zomhlobiso Wobusuku Bomshado
Izimbali ziyadingeka uma kukhulunywa ngobusuku bomshado obuthandanayo. Isebenzisa izimbali ze ukuhlobisa ebusuku komshado kuyisiko elidala kakhulu entshonalanga nasesikweni lethu lendabuko lamaNdiya. Noma ngabe kuqhakaza okungajwayelekile njengama-orchid noma izimbali zendabuko ezifana nezimbali ze-tuberose (rajnigandha) kuyingxenye ebalulekile yokwakha umoya wothando wendoda nowesifazane futhi baqala uhambo lwabo olusha. Kunezindlela eziningi lapho izimbali zingasetshenziswa ukudala ubuhle nedrama egumbini lokulala.
Dala i-canopy: Dala umbhede wezimbali phezu kombhede womshado. Thola i- wezimbali ukwenza enhle kombhede ngezimbali ozikhethele zona. Sebenzisa ama-roses noma ama-orchid, ngamaqoqo, emakhoneni, bese ugoqa izintambo zezimbali ku-cascade ezungeze umbhede. Ngemuva kwenjabulo yomshado, umakoti nomkhwenyana bazothanda ukucwila ku-poster ezine bese bebeka amehlo abo kulezi ziqhumane ezithobayo. Izimbali ezinamakha Njengo-jasmine uzogcwalisa igumbi ngephunga elinekhanda, nelivusa inkanuko.
Imbali Yekhaphethi: Cela isazi sezimbali ukuthi sibeke ukhaphethi wezimbali wama-rose petals noma izimbali ezincane ozikhethele yonke indlela ukusuka emnyango kuya embhedeni. Lona ukhaphethi obomvu ongeke wabakhohlwa ngokujaha abashadikazi abasanda kushada. Faka okumbalwa amakhandlela ngasemngceleni kukakhaphethi ukuqondisa abasanda kushada embhedeni wabo womshado. Lokhu kuyindlela yasebukhosini njengoba ithola. Akukho lutho oluthakazelisa njengalolu uma kukhulunywa ngefayela le- ubusuku bomshado .
Imbali chandelier: Thola i-chandelier yezimbali eyenziwe ophahleni ngezimbali ezintsha ezimbali. Vumela isazi sakho sezimbali ukuthi senze i isikhungo esiyisisekelo ngamakhulu ezimbali ezinamakha. Izibani ezincane zezinganekwane ezinamathiselwe kule chandelier ezinezimbali ezilengayo zizodala uhlobo olukhethekile lomlingo.
Ithiphu: Ngenkathi imihlobiso yezimbali ilungele ezothando ukuhlobisa igumbi lokuqala ebusuku , noma yikuphi ukwaliwa yizimbali okungenzeka umakoti nomkhwenyana banakho kufanele kuxoxwe ngakho kusengaphambili! Noma esikhundleni sobusuku bezothando, kuzoba ubusuku bokuthimula nokuthimula!
I-Focal Point Yemihlobiso Yombhede
Umbhede kufanele ube yindawo yokugxila yabo bonke ukuhlobisa imibhede yothando ngobusuku bomshado . Ngemuva kwakho konke, kulapho konke okwenzekayo kuzokwenzeka khona!
Imihlobiso yezimbali: Thatha ama-rose petals wezimbali ezincane ezinamakha afana ne-jasmine bese usakazeka kuwo wonke umbhede. Ungawahlakaza ngokungahleliwe noma wakhe isimo senhliziyo noma ama-initials omakoti nomkhwenyana. Lapho ukhetha izimbali zakho gcina isikimu sombala we lokuhlobisa lokulala engqondweni ukuze ingangqubuzani nalo lonke uhlelo lombala. Okubomvu nokubomvana kungokhetho oluphephile lwe- a isihloko sothando . Futhi, ungadluli ngokweqile ngenani lezimbali ozisebenzisela ukuhlobisa igumbi lakho lokulala. Ngemuva kwakho konke, awufuni ukushintsha igumbi lokulala libe isitolo sezimbali. Thola ibhalansi elungile.
AmaSwans amahle! Uyemukelwa okusha-weds ngezinye izinto ezintsha zokuhlobisa ithawula. Ama-swans amabili abhekwa njengothando futhi auspicious. AmaSwans ahlotshaniswa nonkulunkulukazi ka uthando nobuhle , UVenus. Funda ukuthi ungawakha kanjani ama-swans kusuka ezifundisweni eziningi eziku-inthanethi ezitholakalayo noma vele ulandele lezi zinyathelo. Thatha ithawula lokugeza ulibeke phansi endaweni okwakheke ngayo umhlaba. Songa amakhona aphezulu phansi nangaphakathi aze ahlangane phakathi. Gingqa imiphetho engaphandle ungene maphakathi nendawo ukuze wakhe umzimba we-swan. Songa umcibisholo ube umumo we-az ukwenza ikhanda le-swan. Beka phansi umumo bese ucindezela amakhona ukudala amajika ekhanda le-swan. Dala i-swan ehambisanayo bese ubeka kokubili ngokumelene nenhliziyo eyenziwe ngama-rose petals!
Ukuphonsa okuhle nemicamelo: Qiniseka ukuthi impahla ethambile embhedeni isezingeni eliphakeme. Sebenzisa ama-bedsket kasilika noma e-satin namabhokisi e-pillow ukuze uthinte izinkanuko. Ungabeka isitaki esithambile, imicamelo eshisayo embhedeni ukuze abathandi bathole induduzo enkulu ngobusuku babo obukhethekile.
Ama-Drapes: Dala i-canopy ye-sheer drapes ezungeze umbhede ukudala ukuzwakala kwezinganekwane. Lezi zithandani zizozizwa sengathi zihlanganiswe esidlekeni sazo sangasese. Ukungeza izintambo ezimbalwa zamalambu ezinganekwane kuzokunikeza ukubukeka okumangazayo . Lokhu kungenye ye- imibono emihle kakhulu yokuhlobisa igumbi lokulala ngobusuku bomshado.
Ithiphu: Qiniseka ukuthi ama-hues wamashidi wokulala namakhava ayahambisana nakho konke okunye ukuhlobisa okusegumbini. Ungangezi imibala eshayisanayo eminingi ngoba lokho kungalimaza isimo sesethingi.
Ukukhanyisa kuyithuluzi Elikhulu
Ukukhanyisa kuhamba ibanga elide ekwakheni indawo enhle ekamelweni labasanda kushada. Uma kukhulunywa nge ukuhlobisa igumbi lomshado ebusuku , ukukhanyisa kuyithuluzi elihle lokushintsha wonke umoya wekamelo lokulala. Unezinketho eziningi zokukhanyisa ongazidlala nazo kodwa kuze kube manje, amakhandlela nezibani zedlozi zengeza ukuthinta okuthinta inhliziyo kakhulu.
Amakhandlela: Hlanganisa izimbali zakho namakhandlela ngendlela yokuthi kuveza okuhle komunye nomunye. Hlela izixha zezimbali emakhoneni amasu wekamelo nokubeka amakhandlela anephunga kuwo. Dala ukwakheka ngamacembe bese ubeka amalambu wetiye kuwo ukugqamisa ukwakheka. Amakhandlela yiwona umphefumulo kwezothando ! Amakhandlela afakwe kubanikazi bokuhlobisa abakhipha iphunga elihle kufanele agcinwe ezingxenyeni ezihlukene zegumbi.
Izibani zefairy: Ingxenye engcono kakhulu mayelana nezibani ze-Fairy ukuthi ungakanani ongakwenza ngazo. Ukusuka ekubadwebeni bezungeza izinsika zakho zokulala ukuze uzibeke ebhodini eliphezulu ukuze uzifake ngezimbali, kunezinketho eziningi njengokucabanga kwakho kukuvumela.
Ithiphu: Susa yonke imithombo yamalambu alukhuni, amhlophe ekamelweni. Baqinisekile umbulali wemizwa !
Yini eyenza okungcono kakhulu romantic lomshado lokulala umhlobiso ziyaphumelela yimizamo ekhethekile eyengeziwe oyifakile. Isibonelo, ukuthinta okuncane njengokudweba ibhafu elinamakha labasanda kushada ngamakhandlela nezimbali kuzokwaziswa yilo mbhangqwana okhathele ongakwazi ukulinda ukucwila kubhavu phumula ngemuva kosuku olumatasa .
Ukuhlelela ukudla ne-champagne kuzokulethela nenqwaba ye-karma enhle ngoba imvamisa, umakoti nomkhwenyana abalibi nethuba lokuluma umshado wesintu . Ngakho-ke, isitsha sikashizi nebhodlela le-bubbly noma iwayini kuzoba yimana evela ezulwini!
Ithiphu: Shiya izingilazi ezimbalwa zobisi lweKesar badam ukuze uthole ama-new-weds njengokuthinta kwendabuko!
Q. Hlobo luni lohlelo lombala olusebenza kahle ngobusuku bomshado?
TO. Ukhululekile ukukhetha noma yiluphi uhlelo lombala inqobo nje uma ama-hues encoma omunye nomunye futhi ungabhali. Okumhlophe nokubomvana nokubomvu nokuphinki noma imibala ebomvu nje kubheja okuphephile. Khetha izimbali zakho nezesekeli kulawa ma-hues.
Q. Hlobo luni lwezimbali okufanele lukhethelwe imibono yokuhlobisa ekamelweni lothando?
TO. I-Roses isho ezothando ngakho-ke qiniseka ukuthi unokuningi kwalokhu. Kukhona amathani ombala nezinhlobonhlobo ongakhetha kuzo. Kodwa-ke, futhi ungaya kuma-carnation, ama-gerberas, ama-tuberoses kanye ne-jasmine. Qiniseka ukuthi unezimbali ezithile ezinamakha ukuze zigcwaliswe ngephunga eliyikhanda.
U. Ingabe kufanele kubekwe ukudla neziphuzo ekamelweni lokulala?
TO. Yebo, imishado yendabuko yamaNdiya ivame ukuba matasa ngakho-ke ekupheleni kwezinqubo, umakoti nomkhwenyana balambe kakhulu, Beka isitsha soshizi nabaqhekezi, ezinye izithelo nebhodlela lewayini kanye ne-bubby ukuze abasanda kushada bazitike.
amathiphu okuvimbela ukuwa kwezinwele
amathiphu okukhula ngokushesha kwezinwele
ikhambi lokwehla kwezinwele nodaka
ukuwa kwezinwele ngenxa yekhambi lasekhaya dandruff
isho ukuthini imoto emnene
isisombululo saphakade sezinwele ezingafuneki ebusweni